गफ ! .....: May 2010
गजल : बन्द हुन्छ
बाटो धेरैजसो जब बन्द हुन्छ ।
विद्धता पनि मान्छेको मन्द हुन्छ ।
सुन्दैन उ कसैको कथा पूराण,
आफ्नै जीवनपूराण स्कन्द हुन्छ ।
वाचिरहन्छ उ कथा आफ्नोमात्र,
र मान्छ कथामा पनि छन्द हुन्छ ।
अनियन्त्रित भएपछि भोगाई,
ठान्छ बहुलठ्ठीमै आनन्द हुन्छ ।
निख्रिंदै जाँदा उ बजारभरी नै,
चर्चाको जरुरी मसलन्द हुन्छ ।
Posted by दीपक जडित at 4:07 AM 8 comments: Links to this post
गफ : केहि नभएको कुरा
आज जन्मदिन परेको हुँदा केहिदिन अघिदेखि नै सोचेको थिएँ जन्मदिनकै मौकामा यौटा ताजा पोष्ट राख्नेछु ब्लगमा । तर आज अचम्मको चकमन्नमा दिन बिताएँ मैले । अनेक कुराहरु आए र गए मगजभरी तर आएका केहि कुराहरुले पनि यौटा सग्लो स्वरुप लिन सकेनन् जस्लाई ब्लगमा प्रस्तुत गर्न सकुँ । साँझतिर त एक हिसाबले आजको मिती चुपचाप पन्साईदिउँ पनि लागेको थियो तर फेरी सोचें, केहि नभएको कुरा नै पनि त ब्लगमा एकपल्टलाई मिती अँकित गर्ने कुरा हुन्छ त्यसैले सोचें केहि त पक्कै लेख्छु र दिउँसो आमालाई सम्झेर कोरेको दुई टुक्रा तर अझै अधुरो कविता पनि राख्छु र ल्याएँ यो केहि नभएको कुरा ।
अरु वर्षहरु भन्दा भिन्दै हिसाबले सोचें मैले यो वर्षको आजको दिन अर्थात आफ्नो जन्म दिन । दिनभरी आमालाई सम्झिएँ मैले आज र त्यहि मेसोमा कोरेको थिएँ यो दुई टुक्राहरु -
यौटा ओथारो वात्सल्यको
र बाटो लागेँ
म ठुलो भएर ।
यौटा भकारी मायाको
चाहिए जति माया
र बाटो लागें
फेसबुकमा लिपिसकेको थिएँ यि दुई टुक्राहरु र यो तस्विरपनि -
नभन्दै ब्लग सुरु गर्दा भएको स्थानको र हाल बसिरहेको स्थानको समयान्तरले गर्दा मितीले पनि एकदिनको फड्को हानिसकेछ ।
Posted by दीपक जडित at 1:32 AM5comments: Links to this post
कविता : बाँसुरी रोईरहेछ
आजभोलि हरेक साँझ
जब अनन्त ईच्छाले तानिएर
तीनजोडा समान उल्टा औँलाहरु
बाँसुरीको छ अलग डोबहरुमा बिसाएर
मधुर राग अलाप्न उत्सुक ओठलाई
सातौं डोबमा छुवाउने गर्छु
प्रफुल्लित मन त्यसै त्यसै
अनन्त फाँटहरुमा बयेली खेल्दै
बाँसुरीको धून खोज्दै
मिथ्या तरंगमा तरंगित हुन्छ
अफसोस! श्वास प्रश्वासले धोका दिन्छ
मन रुन्छ अनि म रुन्छु
बाँसुरी कुनै सुर फुटाउन सक्दैन
त्यसैले आफैंलाई धिक्कारेर
बाँसुरी रोईरहेछ ।
असार, २०५४ साल
Posted by दीपक जडित at 3:46 AM5comments: Links to this post
(खसखस डटकम तथा आफ्नै फेसबुक नोटमा प्रकाशित।)
रचना काल -
१२ असार २०५८
Posted by दीपक जडित at 10:13 AM2comments: Links to this post
गजल : दिलको दीपक बालीहेर
यसपाली घर पुगेर आउँदा साथमा आएका पहिले लेखेका केहि कुराहरु मध्ये यो गजल पनि यौटा हो । यो लेखिएको मिती ठ्याक्कै सम्झना छैन तर २०५३ सालतिर सुन्दरपुर मोरङबाट निस्कने फूलबारी पत्रिकामा यो छापिएको रहेछ, त्यसैले यो गजल २०५२,५३ सालतिर लेखिएको हुन सक्छ । मैले त्यहि पत्रिकाको टुक्रा भेटेर ल्याएको हुँ यसलाई र जस्ताको तस्तै राखेको छु । अहिले हेर्दा यसमा मात्रामा निक्कै कमबेसी देखेपनि यो ब्लगमा राख्नैको लागी भने सच्याईरहनु उपयुक्त ठानिंन ।
यो गजल देखेपछि मलाई सम्झना आयो कि त्यो बेला म मधुपर्क खुब पढ्थें र मधुपर्ककै कुनै अँकमा लेखिएको यौटा गजल -
ह्रदयको अँगेनोमा फेरी आगो बालीहेर ।
हुन्छ साथी अझ धेरै मट्टितेल हालीहेर ।
हेरेर त्यसैको संरचनाको नक्कल गर्दै लेखेको थिएँ । मधुपर्कको त्यो गजल बुँद रानाको थियो कि जस्तो लागेको छ मलाई तर हो नै भन्न सक्दिंन ।
आफ्नो सम्झे तिम्रै हुँ म मित्रता सम्हाली हेर ।
जे सम्झन्छौ त्यहि हुँ म नत्र यो मन चालीहेर ।
मेरा उपर तिमीभित्र अविश्वासका तुष भए,
खेद छैन मलाई लगि रछ्यानमै फालीहेर ।
ईच्छा भए हामीबिचको मित्रतालाई प्रगाढ पार्ने,
भएजति सन्देहका प्वालहरु टालीहेर ।
अनायासै कुनै क्षण मलाई छाम्ने रहर जागे,
कति कोमल हुनेछु म मुटुभित्र हालीहेर ।
Posted by दीपक जडित at 1:07 AM4comments: Links to this post
गफ : फर्केपछिको कुरा
फर्किनु छँदैथियो आँखिर, फर्किएँ म ।
प्यारी छोरी, परिवारजन, ईष्टमित्र, नातागोता, घर, समाज, देश सबै छोड्छु नै भन्ने थियो ।
बिस्मात कत्ति लागेन । तर समयसँग निक्कै दुखमन रहयो । माथी उल्लेखितहरु बाहेकका, भाषा र देशको सिमानाले नाता जोडेका केहिहरुसँग भने बिस्मात पनि लाग्यो । तिनीहरु थिए म पछिल्लो पटक काठ्माण्डौ छिरेको दिनदेखि काठ्माण्डौ बसुञ्जेल बन्द हड्ताल ईत्यादि गरेर मेरो समयलाई अस्तब्यस्त बनाउने राजनीतिक प्राणीहरु र तिन्को लहै लहैमा लैबरी गाउँने सोझासिधाहरु ।
त्यसो त आक्रोस पनि उस्तो बचेको छैन । बचाईराखेर आक्रोसले मलाई केहि दिंदैन त्यति त म बुझ्छु । जे हुनु थियो त्यति त भएको हो । अरु के हो र ? काठ्माण्डौ छोड्नेबेला केहि असल मनहरुलाई भेट्ने हार्दिक ईच्छा पुरा भएन । यो अलिकति खल्लो लागेको हो तर समय फेरी अवश्य आउला ती असल मनहरुसँग भेट्ने ।
आशावादी छु ।
काठ्माण्डौ छोड्ने अघिल्लो दिन फेसबुकमा लेखेको थिएँ, 'धेरै शब्दहरु चपाएर भोली लुसुक्क नेपाल/काठ्माण्डौ छोड्दैछु । भेट्न नसकेका थुप्रै असल मनहरुले मलाई माफ दिउन ।'
कस्तो दह्रो विश्वास छ भने मैले माफी पाईसके जस्तै लागेको छ ।
साथमा यसपाली पहिले पहिलेका निक्कै कुराहरु बोकेर ल्याएको छु । अझै धेरै कुराहरु त मगजमा कोचेर पनि ल्याएको छु । ब्लगमा बाँड्नलाई अब धेरै कुराहरु एकैसाथ छन् मसँग - बाँड्दै जानेछु । तीन महिना भयो आफ्नो ब्लगमा झुक्किएर लेखे बाहेक अरुको ब्लगमा पसेर स-रुचि सामाग्रीहरु नपढेको । नपढेपछि प्रतिक्रिया लेख्ने कुरा पनि भएन । अब पढ्छु अनि प्रतिक्रियाहरु लेख्छु पनि । समय फालाफाल छ । मित्रब्लगहरुमा प्रतिक्रिया लेखिनँ भनेर माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन थाहा छैन । मित्र ब्लगहरुमा प्रतिक्रिया नलेख्नु अपराध हो भन्ने घोषणा नहुञ्जेल माफी माग्नु नपर्ला भन्ने सम्झन्छु । भैगो माग्दिन तर मैले मित्र ब्लगको ढोका नखोल्दा पनि मित्र ब्लगरहरुले मेरो ब्लगमा प्रतिक्रिया लेख्नुभएको प्रति मैले हार्दिक आभार प्रकट गर्नैपर्छ ।
ब्लगरहरुको सुचीबाट म हराईहाल्दिंन अहिले नै त्यसैले यो कविता ल्याएको छु । २०५७ सालको भदौ २५ गते कुपण्डोलबाट लेखेको यो कविताको मैले शिर्षक राखेको रहेनछु । शिर्षक आफैं राख्नुहोला र कविताको अन्त्यको 'छ' यतिखेर थियो भैसकेको छ त्यसैले त्यसपछिको कविता आफैं लेखेर पढ्नुहोला ।
पेश गरें -
खुट्टा तन्काएर तनक्क
डङ्ग्रङ्ग पल्टिएको घोडालाई
मरेको ठानेर तिनीहरुले
अत्यन्तै परिश्रम पूर्वक
गहिरो खाडल खनेर
जब तम्तयार भए पुर्नलाई
यसैबीच त्यो आयो
त्यहि घोडा चढेर
खाडल नाघेर गयो
त्यो त गयो
खाडल नाघेर गै गयो
तर तिनीहरुले अझसम्म
न खाडल पुर्न सके
न खाडल तर्न सके
यस्तैमा दृश्य सकियो
यो त नाटक रहेछ
धारावाहिक हो क्यारे
बाँकी दृश्य हेर्न
पर्खनै पर्ने भएको छ ।
Posted by दीपक जडित at 4:45 AM6comments: Links to this post